अब १ रुपैयाँमा नै सामसुङ जे सेभेन किन्न पाईने
प्रकाशित २०७४ माघ २९ सोमबार
काठमाडौं । काठमाडौंको मुटु सुन्धाराको सिटिसी मलको चौथो तल्लामा रहेको ईजी मोबाइल केयर प्रा.लि.ले मोबाइल खरिदकर्ताहरुका लागि किस्ताबन्दीमा विभिन्न ब्राण्डका मोबाइल दिने योजना ल्याएको छ ।
कम्पनीले हाल नेपाली बजारमा लोकप्रिय र सर्बाधिक बिक्री भईरहेको सामसुङ ब्राण्डको जे सेभेन म्याक्स स्मार्टफोन मासिक किस्ताबन्दीमा दिने भएको छ । कम्पनीले सामसुङ जे सेभेन म्याक्स स्मार्टफोन रु. १ रुपैयाँ तिरेपछि मासिक किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने योजना सार्वजनिक गरेको हो ।
सो अफरअन्तरगत अधिकतम बजार मूल्य रु.२८,२९० तोकिएको सामसुङ जे सेभेन म्याक्स स्मार्टफोन ग्राहकहरुले रु. १ बुझाएर नै घर लैजान सक्नेछन् । सो स्मार्टफोनको बाँकी मूल्य सरल किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
ईजी मोबाइल केयर प्रा.लि.का अध्यक्ष संजित पौडेलले अझैपनि बजारमा ग्राहकहरुले चाहे अनुसारको मोबाइल किन्न र सेवा सुविधा नपाएको हुँदा ग्राहकहरुलाई मासिक किस्ताबन्दीमा स्तरीय मोबाइल बिक्री र सर्भिस दिने लक्ष्य लिएको बताए ।
‘‘हामी पहिलेदेखि नै मोबाइल क्षेत्रमा सक्रिय कम्पनी भएको हुँदा ब्राण्डेड मोबाइल बिक्री गर्ने र बिक्रीपछिको उत्कृष्ट सेवा दिने कार्य गरिरहेका छौं । यसैको एउटा पाटोकोरुपमा हामीले विभिन्न मोबाइल फोनहरु किस्तामा दिदैँ आएका छौं, मासिक किस्तामा फोन किनेर ग्राहकहरुलाई फाईदा लिन हामी आग्रह गर्दछौं ।’’ अध्यक्ष पौडेलले भने।
कम्पनीले बिक्री गर्ने कुनैपनि ब्राण्ड र मोडलका मोबाइल सेटहरुमा थप १ वर्षको वारेन्टि दिने गरेको छ । अन्य कम्पनीबाट मोबाइल किन्दा १ वर्षको मात्र वारेन्टी हुने गरेकामा ईजी मोबाइल केयर प्रा.लि.बाट खरिद गरेको मोबाइलमा थप १ वर्षको वारेन्टी पाईने कम्पनीले जनाएको छ ।